Ihe Akwụwaghị Aka Ọtọ Ga-akpatara Gị
Ọ̀ Ka Bara Uru Ịna-akwụwa Aka Ọtọ?
Ihe Mere Ịkwụwa Aka Ọtọ Ji Aba Uru
Ihe Anyị Ga-eme Ka Obi Na-eru Anyị Ala
Echegbula Onwe Gị
ỤLỌ NCHE Nke 1 n'Afọ 2016
ISIOKWU ỤLỌ NCHE A | ỊKWỤWA AKA ỌTỌ Ọ̀ BARA URU?
Otu nwaanyị Saụt Afrịka aha ya bụ Samantha kwuru, sị: “A na-enwekarị nsogbu ndị ọ na-abụ, anyị ghatụ obere ụgha, anyị esi na ha pụta.”
Ì kwetara ihe a Samantha kwuru? N’eziokwu, onye ọ bụla n’ime anyị enweela oge otu nsogbu ma ọ bụ ọzọ bịaara ya. Ma, ihe anyị ga-eme ma anyị nwee ụdị nsogbu nwere ike ime ka anyị ghara ịkwụwa aka ọtọ ga-egosi ihe anyị ji kpọrọ ihe. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ihe kacha anyị mkpa ná ndụ bụ ka a ghara imenye anyị ihere, anyị nwere ike iwere na o nweghị ihe o mere ma anyị ghara ịkwụwa aka ọtọ mgbe ụfọdụ. Ma, n’ikpeazụ, anyị na-ahụ na akwụwaghị aka ọtọ na-aghọkarị ahịa. Ka anyị lee otú o si aghọ ahịa.
MMADỤ AKWỤWAGHỊ AKA ỌTỌ GA-EME KA NDỊ ỌZỌ KWỤSỊ ỊTỤKWASỊ YA OBI
Ọ bụrụ na mmadụ abụọ tụkwasịrị ibe ha obi, ha ga na-adị ná mma. Ha agaghị na-enyo ibe ha enyo. Ma, ọ naghị abụ mmadụ hụhaala ibe ya, ya ebido ozugbo tụkwasịwa ya obi. Mmadụ na-ebido ịtụkwasị ibe ya obi ma ha na-anọkọ, na-akọrọ ibe ha obi ha, ma na-achọkwa ọdịmma ibe ha. Ma, mmadụ nwere ike ịkwụsị ịtụkwasị enyi ya obi ma ọ ghọọ ya aghụghọ naanị otu ugbo. Ụdị ihe a mee, ọ na-esi ezigbo ike ịtụkwasị onye ahụ obi ọzọ.
Ezigbo enyi gị ọ̀ ghọtụla gị aghụghọ? Olee otú obi dị gị mgbe ahụ? Ọ ga-abụ na o wutere gị, ma ọ bụdị na i weere ya na enyi gị ahụ mechuru gị ihu. Ọ bụ otú ọ na-adị. O doro anya na mmadụ abụọ dị́ n’ezigbo mma nwere ike kwụsị ịdị ná mma n’ihi na otu onye n’ime ha akwụwaghị aka ọtọ.
I SORO NDỊ NA-ANAGHỊ AKWỤWA AKA ỌTỌ NA-AKPA, Ị GA-EMEWE KA HA
N’otu nchọpụta otu prọfesọ aha ya bụ Robert Innes mere, ọ chọpụtara na “n’eziokwu, akwụwaghị aka ọtọ dị ka ọrịa na-efe efe.” Onye na-anaghị akwụwa aka ọtọ dị ka onye bú ọrịa na-efe efe. Ọ bụrụ na gị na onye na-anaghị akwụwa aka ọtọ na-akpachi anya, i nwere ike ibido mewe ka ya.
Olee ihe ga-enyere gị aka ịna-akwụwa aka ọtọ mgbe niile? Ọ bụ Baịbụl. Ka anyị lebazie anya n’ihe ole na ole Baịbụl kwuru ga-enyere gị aka.
Ihe Akwụwaghị Aka Ọtọ Pụtara
GỊNỊ KA Ọ PỤTARA? Ọ pụtara ịgwa onye kwesịrị ịma eziokwu ihe na-abụghị eziokwu. Ọ pụtakwara ikwu ihe na-abụchaghị otú o si mee iji duhie mmadụ, na ịghara ikwu ihe ụfọdụ iji duhie mmadụ, nakwa mmadụ ime ka ọ̀ bụ ihe ọ na-abụghị.
IHE BAỊBỤL KWURU: “Onye aghụghọ bụ ihe arụ n’anya Jehova, ma ya na ndị na-eme ihe n’eziokwu na-enwe mmekọrịta chiri anya.” (Ilu 3:32) “Ebe unu hapụworo okwu ụgha, ka onye ọ bụla n’ime unu na-agwa onye agbata obi ya eziokwu.”—Ndị Efesọs 4:25.
GỊNỊ KA Ọ PỤTARA? Ọ pụtara ịgha ụgha ma ọ bụ ikwu ihe na-abụghị eziokwu iji mebie aha mmadụ.
IHE BAỊBỤL KWURU: “Onye aghụghọ na-ezisa esemokwu, onye nkwutọ na-ekewakwa ndị ha na ibe ha dị ná mma.” (Ilu 16:28) “Ọ bụrụ na nkụ adịghị, ọkụ na-anyụ, ọ bụrụkwa na e nweghị onye nkwutọ, esemokwu na-akwụsị.”—Ilu 26:20.
GỊNỊ KA Ọ PỤTARA? Ọ pụtara ịghọgbu mmadụ rie ego ya ma ọ bụ nara ya ihe ndị o nwere.
IHE BAỊBỤL KWURU: “Erigbula onye ọrụ e goro ego nke nọ ná nsogbu, nke dakwara ogbenye.” (Diuterọnọmi 24:14, 15) “Onye na-erigbu onye ọ na-enweghị ka ọ hà ya akọchawo Onye kere ya, ma onye na-emere ogbenye amara na-enye Ya otuto.”—Ilu 14:31.
GỊNỊ KA Ọ PỤTARA? Ọ pụtara iwere ihe mmadụ n’anataghị ya ikike.
IHE BAỊBỤL KWURU: “Ka onye na-ezu ohi kwụsị izu ohi, kama ka ọ rụsie ọrụ ike, jiri aka ya na-arụ ọrụ ọma, ka o wee nwee ihe ọ ga-ekenye onye nọ ná mkpa.” (Ndị Efesọs 4:28) “Unu ekwela ka e duhie unu. . . . Ndị ohi, ma ọ bụ ndị anyaukwu, ma ọ bụ ndị aṅụrụma, ma ọ bụ ndị na-ekwujọ mmadụ, ma ọ bụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, agaghị eketa alaeze Chineke.”—1 Ndị Kọrịnt 6:9, 10.
mailto:?body=Ihe Akwụwaghị Aka Ọtọ Ga-akpatara Gị%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2016003%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe Akwụwaghị Aka Ọtọ Ga-akpatara Gị
Nke 1 n'Afọ 2016 Ịkwụwa Aka Ọtọ Ọ̀ Bara Uru?
mailto:?body=Nke 1 n'Afọ 2016 Ịkwụwa Aka Ọtọ Ọ̀ Bara Uru?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dwp16%26issue%3D201601%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nke 1 n'Afọ 2016 Ịkwụwa Aka Ọtọ Ọ̀ Bara Uru?